काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई १८ प्रश्न (अन्तर्वार्ता)
१.काठमाडौंको प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईंका योजना र प्राथमिकता के/के हुन्?
२.महानगरले यसअघि बनाएको पाठ्यक्रमले यी विषय समेट्न सकेनन् भन्ने हो?
४.‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गरी पढाइने भन्नुभयो, अत्यन्त न्यून आयस्तर भएका बालबालिकालाई कसरी प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउनुहुन्छ?
५.आगामी पाँच वर्षसम्म तपाईंले महानगरको नेतृत्व गर्दा यहाँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ?
७.मेलम्ची आयोजनाले केही हदसम्म काठमाडौ्मा पानीको आपूर्ति गरिरहेको छ, यो अझै पर्याप्त छैन, पिउने पानीको पर्याप्ततालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
८.उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। फोहोरको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्नुहुन्छ?
अहिले नुवाकोटको सिसडोलमा ‘डम्पिङसाइट’ छ। ‘इन्सिनरेटर सेल’ राखेर बञ्चरेडाँडामा बनाइएको नयाँ डम्पिङसाइट अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। त्यसको अनुगमन महानगर र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि भएन। त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छौं। ठाउँ-ठाउँमा इन्सिनरेटर (फोहोर जलाउने मेसिन) राखेर फोहोरको मात्रालाई एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ।
स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोरलाई छुट्याउन सकिन्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने भए नागरिकले किन फोहोर छुट्टयाएर राख्छन् र? फोहोर लिनका लागि हामी दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्छौं। सातामा दुई दिन फोहोर लिन आउँदा फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने गाडी पठाउँछौं।
टोल-टोलमा कन्टेनर राखिएको अवस्थामा पनि दुई/दुई वटा कन्टेनर राख्छौं। स्रोतमा नै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। नकुहिने फोहोरको त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जैविक मललाई राजधानी नजिकका खेतीयोग्य काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ।
९.काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन र अव्यवस्थित ‘पार्किङ’लाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
१०.विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तपाईंको के सोच छ?
११.सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासिलो कसरी बनाउने?
१३.पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा नगरबासीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ नि?
सडक विभागले सडक बनाउँछ। सडकको निश्चित ‘डेन्सिटी’, ‘टेम्प्रेचर’ र ‘कम्प्याक’ हुन्छ। यसको अनुगमन महानगरले गर्छ। म आफैं पनि इन्जिनियर हुँ, म पनि जान्दछु। डेन्सिटी पुगेन भने फेरि पेल्न लगाउन सकिन्छ। काम भइरहेको स्थानमा अनुगमन भइरहेको छैन। सडकमा ढलान गरियो तर ढलानमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ? निर्माणकर्ताले जस्तो प्रतिवेदन दियो त्यसलाई मान्ने गरिएको छ। अब त्यस्तो हुँदैन, सडकमा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ, पहिले त्यो महानगरको प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं। बाटामा हुने खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न ‘इन्फ्रास्टकचर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेछौं।
१५.‘होर्डिङ बोर्ड’ र तारको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन?
१६.सार्वजनिक शौचालयको उचित प्रबन्ध नहुँदा नागरिक छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
१७.काठमाडौंको कला, संस्कृति, यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?
१८.यहाँ स्वतन्त्र रूपमा प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो तर तपाईंका सारथीहरू दलीय प्रतिनिधित्वका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला। कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?